10 First Date hembe Tips Vanhu
Last updated: Chivabvu. 21 2019 | 2 Maminitsi verenga
Takaona vose vakasangana vanhu apo asina kutarira zvatinogona. Takaona akasangana vavakidzani matsva kana tsangadzi. Takaona akasangana mumwe wandaishanda naye mutsva zuva apo isu kuchadonha kofi pamusoro hembe dzedu. Sezvo shoko anoenda, isu chete kuwana mumwe mukana kuti kuororwa. tichadaro, zvisinei, ona vavakidzani vedu uye vavaishanda navo zvimwe isu kudarika kuda. A musi kwakasiyana. Chekutanga, hazvivimbisi kuti uchawana mukana mumwe musi. Chepiri, iye ari kuenda hanya zvakawanda nezvechitarisiko chako pane muvakidzani wako kana aishanda. Usanetseke, Zvisinei. Ndiri pano kuti vabatsire 10 First Date hembe Tips Vanhu.
1. Achigadzirire kuti kungoitawo ufanane chiitiko. Kana anenge mumwe mumwe murume ari muresitorendi achapiwa akapfeka zvemitambo bhachi, haufaniri kuratidza kukwira pasina mumwe. Zviri nyore zvikuru kuti kupfeka pasi nhunzi pane vapfeke kana ukaona underdressed.
2. Achigadzirire kukodzera okunze. Toti une kudya kwamanheru zvirongwa uye pashure kudya musi yako anoratidza achifamba nomugwagwa nokuda dhizeti. Unoda kuva vakagadzirira.
3. Wear zvakanaka shangu! No pafiripi flops kana Tennis shangu…kana uri pamhenderekedzo yegungwa kana kutamba Tennis. Vakadzi vanoda shangu uye ivo vachava cherechedzai zvako.
5. Pfeka chinhu kuti inonyatsoenderana zvakanaka. The zvakakodzera nguo yenyu kupfuura muchiso, maitiro kana chimwe chinhu. Nokuti vaya uchida kupfeka nakisa zvakasimba hembe…regai…chete regai…
6. Pfeka chinhu kuti anoshandiswa uye vakasununguka. Kunyanya kana iwe zvinoodza kuwana huta musi wokutanga, zvipe chimwe shoma chinhu pamsoro.
7. Kupfeka bhandi chokuti inopindirana shangu dzako. Inoita hembe yako kutarisa zvizere.
8. Get zvaunofunga. Bvunza waunogara naye, shamwari, waaishanda kana munhu waunovimba naye pamusoro hembe yako. Haufaniri kuvatendera bhande, asi kungoti kukumbira kana ukatarira OK kungakubatsira kunze.
9. Regai kupfeka chinhu zvakanyanyisa kana kuti zvinhu. Haufaniri kupfeka kufanana sekuru vako, asi iwe haudi nguvo dzenyu kuva kutikanganisa. Asi panguva imwe chete…
10. Iva zvauri! Women rudo chivimbo. Pfeka chinhu rwunoratidza unhu hwako.